अहिलेका बालबालिका किन पुलपुलिएका छन् ?केही अभाव, समस्या र कष्ट पनि झेल्न सिकाऔं – Kathmandutoday.com
अहिलेका बालबालिका किन पुलपुलिएका छन् ?केही अभाव, समस्या र कष्ट पनि झेल्न सिकाऔं
काठमाण्डु टुडे २०७६ असार २४ गते १४:३१ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, २४ असार‍- अहिलेका बालबालिकालाई ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गर्नै हुँदैन । तिमी, तपाईं, हजुर भनेर मान मनितो गर्नुपर्छ । आमाबुवाले कडा शब्द बोलेमा उनीहरु रिसाउँछन्, कराउँछन् । अहिलेका बालबालिका गाली सहनै सक्दैनन् । गाली सुन्नै चाहँदैनन् । उनीहरुलाई जतिबेला पनि फकाई फुल्याई गर्नुपर्छ ।बच्चाहरु खाना खान मान्दैनन्, समयमा सुत्न मान्दैनन् । खाना ख्वाउनका लागि पनि उनीहरुलाई कर गर्न पर्छ । अनेक लोभ देखाएर, फकाएर खाना ख्वाउनुपर्छ । नभए त घरमा पाकेको खानेकुरामा रुची नै देखाउँदैनन् । जंकफुड खाएरै पेट भर्न खोज्छन् ।
घरमा मिठो मसिनो पाकेको उनीहरुलाई मतलब हुँदैन । घरमा भोज -भत्तेर भएको पनि वास्त हुँदैन । आफ्नो घरको भान्सामा के पाकिरहेको छ रु कस्तो स्वादको छ भनेर चासो राख्दैनन् । उनीहरु घरको खानाप्रति उदासिन छन् । दालभात ख्वाउनै गाह्रो छ ।अहिलेका बालबालिकाहरु लताकपडाप्रति पनि त्यती जागरुक छैनन् । उनीहरुलाई नयाँ-नयाँ र थरीथरी डिजाइनको लुगा त चाहिन्छ, तर लुगा जतन गर्ने, मिलाएर लगाउने गर्दैनन् । नयाँ लुगा पाउँदा पनि उनीहरु उमंगित हुँदैनन्, मिठो-मसिना ख्वाउँदा पनि उनीहरु उत्साहित हुँदैनन् ।
किनभने अहिले धेरैजसो दम्पतीले एक्लो सन्तान हुर्काइरहेका छन् । आमाबुवाले त्यही एउटा बच्चालाई सम्पूर्ण माया दिएका छन् । पुलपुल्याएका छन् । जे माग गर्छन्, त्यही पुरा गरिदिएका छन् । आफुले मागेको सबै कुरा पुरा हुन्छ भन्ने परेको छ बच्चालाई । त्यही भएर उनीहरुले जे चाहन्छन्, तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ ।अहिलेका बच्चामा धैर्यता छैन । उनीहरुले जे चाह्यो, जतिबेला चाह्यो तुरुन्त उपलब्ध हुनुपर्छ । उनीहरु धै्रर्य गर्न सक्दैनन् ।कसैसँग स्वतस्फूर्त बोल्न, कुराकानी गर्न चाहँदैनन् । सकेसम्म एक्लै बस्न खोज्छन् । आफन्त, परिवार, इष्टमित्रसँग घुलमिल हुँदैनन् । आफ्नै परिवारका नातागोताका मान्छे पनि बिरानो झै मान्छन् । अपरिचित झै मान्छन् ।
सामाजिक सेवाको काममा उनीहरु कतिपनि उत्सुक हुँदैनन् । समाजको काममा आफ्नो सहभागिता खोज्दैनन् । सकेसम्म सबैसँग दुरी बढाएर एक्लै बस्न रुचाउँछन् ।
के बच्चाको दोष हो रु
सरसर्ती हेर्दा त सबै दोष बच्चाको हो । बच्चा खराब हुन् । एकलकाँटे हुन् । पुलपुलिएका हुन् । बुवाआमाले भनेको टेर्दैनन् । आफ्नो हठ छाड्दैनन् । जिद्दी छन् । उदण्ड छन् ।निश्चय पनि अहिलेका बच्चा हुर्काउन अभिभावकका लागि कठिन छ । बच्चालाई खुसी राख्न अभिभावकले अनेक प्रयास गर्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि बच्चा नै खराब हुन् । उनीहरु नै सम्पूर्ण दोषको भागिदार हुन् ।
वच्चाको दोष भन्दा पनि उनीहरुलाई हुर्काउने क्रममा गरिएको हाम्रो त्रुटी हो यो । अहिले हाम्रो परिवार टुक्रिएको छ । हिजोको जस्तो संयुक्त परिवार छैन । एउटा दम्पतीले एउटा बच्चा हुर्काइरहेका छन् । त्यसमा पनि दम्पती कामकाजी छन् । दुबै आ-आफ्नो काममा जान्छन् । बच्चा एक्लो हुन्छन् । बच्चाको साथी छैन ।विगतमा धेरै बच्चा एकसाथ हुर्कन्थे । उनीहरु आपसमा झगडा गर्थे, मिल्थे । खानेकुरा खोसाखोस गर्थे, बाँडीचुडी खान्थे । कुनैपनि कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्थे । एउटालाई नयाँ लुगा दिएमा अर्कालाई पनि त्यस्तै चाहिन्थ्यो । एउटालाई मिठो खाना दिएमा अर्कालाई पनि मिठो खाना दिनुपथ्र्यो ।यसले उनीहरुमा प्रतिस्पर्धाको भावना बढ्यो । खानेकुरामा होस् वा लगाउनेमा, उनीहरु आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले ।
विगतमा बालबच्चाहरु अभावमा हुर्किए । उनीहरुले सबै कुरा पर्याप्त पाएनन् । त्यसैले उनीहरुले अभाव झेल्न सिके । धै्रर्य गर्न सिके । भोक सहेर बसे । पुरानै लुगामा चित्त बुझाएर बसे । यसरी उनीहरुमा धेरै राम्रो गुणको विकास भयो ।यद्यपी अहिलेका बच्चामा यस किसिमको गुण विकास हुनै पाएन । उनीहरुले बाँडीचुडी खानु परेन । एउटै खानेकुरा वा खेल्नुकुराको लागि लुछाचुडी गर्नु परेन । नयाँ लुगाको लागि देखासेखी गर्नुपरेन । त्यसैले यी सबै कुरामा उनीहरुको चासो पनि बढेन । यसको नकारात्मक असर के भइदियो भने उनीहरुमा प्रतिस्पर्धाको भावना विकास भएन । धैर्य गर्ने क्षमताको विकास भएन । सहनसिलताको गुण विकास भएन । यी सबै उनीहरुलाई हुर्काउने क्रममा गरिएको गल्ती हुन् ।
त्यसैले बच्चालाई सानै उमेरदेखि धेरै प्राथमिकता दिएर हुर्काउने नगरौं । सबैकुरा पुरा गरेर माया दर्शाउने नगरौं । आमाबुवाले जे पनि पुरा गरिदिन्छ भन्ने भावनाको विकास हुन नदिऔं । थोरै अभाव, थोरै कष्ट, थोरै समस्यासँग पनि जुध्न सिकाऔं ।
काठमाण्डुमा केही घरधनी जो यतिसम्म निर्दयी छन्…
हिंडेरै काठमाण्डु उपत्यका छाड्दै हुनुहुन्छ ? खबरदार !
लकडाउन केही खुकुलो पार्ने सरकारको निर्णय
काठमाण्डुबाट एकाबिहानै १ सय ३९ जना पक्राउ
औषधिमा खाने मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्रीसँग देउवाको माग
लकडाउन खुलेको दुई सातापछि मात्र एसईई परीक्षा
राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको प्रशंसा, जनतालाई यस्तो अपिल
उच्च ज्वरो आएकी युवतीको भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु
सिरानद्वारा समाचार हटाइएको स्वीकार, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारमाथि होला त कारबाही ?